Izinhlamvu zemali zensimbi ezimbozwe kabili Zinc Alloy Made Dual Plating Soft Enamel Coin Badges
Plating umbala: igolide lasendulo + igolide
Isethenjwa sobuciko: ukugoqeka okubili + koqweqwe lwawo okuthambile
Ukuqamba, ikhwalithi ephezulu nokwethembeka yizindinganiso eziyinhloko zenkampani yethu. Lezi zimiso namuhla ezengeziwe kunanini ngaphambili zakha isisekelo sempumelelo yethu njengenkampani esebenzayo maphakathi nosayizi ye-Wholesale Price China Customized 3D Logo Electroplating Double Sided Challenge Coin, Siyabonga ngokuthatha isikhathi sakho esifanele ukusivakashela futhi uhlale kahle ukuze ube nokubambisana okuhle kanye nawe.
Isitolo esidayisa yonke impahla Inani China Challenge Coin futhi 3D Coin amanani, sinethemba ngobuqotho ukusungula ubuhlobo obuhle obuhle bebhizinisi besikhathi eside nenkampani yakho ehlonishwayo icabange leli thuba, ngokususelwa ebhizinisini elilinganayo, elihlomulisayo nelizuzayo kusukela manje kuze kube kusasa.
Ukulethwa okusheshayo Intengo Yemali Yezinselelo ZaseChina kanye Nentengo Yezandla Zensimbi, Uma nganoma yisiphi isizathu ungaqiniseki ukuthi uzokhetha muphi umkhiqizo, ungangabazi ukuxhumana nathi futhi sizojabula ukukucebisa futhi sikusize. Ngale ndlela sizobe sikunikeza lonke ulwazi oludingekayo ukuze wenze ukukhetha okuhle kakhulu. Inkampani yethu ilandela ngokuqinile "Sinda ngekhwalithi enhle, Thuthukisa ngokugcina isikweletu esihle. ”Inqubomgomo yokusebenza. Yamukela wonke amaklayenti amadala namasha ukuvakashela inkampani yethu futhi akhulume ngebhizinisi. Besilokhu sifuna amakhasimende amaningi ngokwengeziwe ukudala ikusasa elikhazimulayo.
Langaphambilini Izinhlangothi Ezimbili Zokwakheka Kwensimbi Metal Badge Soft Koqweqwe Lwemali Lokukhumbula nge-Epoxy Covering
Olandelayo: Izinhlamvu zemali zesikhumbuzo se-Antique Nickel Souvenir